Banijya News | » मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको अन्तिम तयारी को भित्रदै, को बाहिरिदै ? मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको अन्तिम तयारी को भित्रदै, को बाहिरिदै ? – Banijya News
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको अन्तिम तयारी को भित्रदै, को बाहिरिदै ?
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको अन्तिम तयारी गरेका् छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाइरहेका सल्लाहकार तथा उनी निकट नेताहरुले मुखै खोलेर यस विषयमा केही नबताए पनि केही मन्त्रीहरुले आफन्त तथा सन्निकटहरुसँग प्रधानमन्त्री ओली अधिकांश मन्त्रीहरुसँग खुशी नरहेको र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पेचिलो तयारीमा लागेका हुन् । बिदा भएका मन्त्रीहरुलाई अयोग्यको दाग नलागोस् । त्यसैले सुरक्षित र चित्तबुझ्दो तर्क दिएर उनले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न तयारी थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफू निकट नेताहरु र मुख्य रुपमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन् । प्रचण्डसँग आइतबार मात्रै पनि ओलीले डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा हट्ने, जिम्मेवारी हेरफेर हुने र निरन्तर रहने मन्त्रीका नाममै छलफल गरेका प्रधानमन्त्री निकट एक नेता बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान मन्त्रीपरिषदबाट १० मन्त्री विदा हुने भएका छन् । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० मन्त्रीलाई राजिनामा गराएर १० नयाँ मन्त्री ल्याउने अन्तिम कसरत थालेका छन् । पुराना केही मन्त्री बाँकी राखेर १० जना मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने तयारी भइरहेको छ । बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमण सकिएलगतै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गराउने तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल यथावत रहनेछन् । उनीहरु मन्त्रीबाट नहटेपनि मन्त्रालय भने फेरबदल हुनसक्नेछ ।
मन्त्री मण्डल पुनर्गठनको बहस उत्कर्षमा पुगेपछि मन्त्री बन्नेहरुको दौडधुप पनि तिब्र छ । पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे जसरी पनि अर्थमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । उनले पछिल्लो समय प्रचण्डलाई समेत हातमा लिन थालेका छन् ।
पुर्व गृह तथा रक्षा मन्त्री भिम रावललाई पनि मन्त्री बनाउने आश्वासन ओलीले दिएको बताइन्छ । उनी यतिखेर आफ्नै पाटीको कार्यशैलीको सबैभन्दा विरोधी नेता हुन् । तर माधव नेपाल पक्ष भएका कारण उनले पद पाउने यसै भन्न सकिदैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र महेश बस्नेतलाई पनि फेरी मन्त्री बनाउने सम्भाबना रहेको छ ।
त्यस बाहेक यज्ञराज सुनुवार, बिरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । पूर्व माओवादीका तर्फबाट भने देवेन्द्र पौडेल अग्र पंतिम छन् । पौडेललाई प्रचण्डले नया शाक्ति छाड्दा जसरी पनि मन्त्री दिने आवश्वसन दिएको कारण पनि यतिखेर मन्त्री बन्ने लाइनमा आएका हुन् । पम्फा भुषाल, जनार्दन शर्मा, अग्नि प्रसाद सापकोटा, टोप बहादुर रायमाझी यतिखेर मन्त्रीको लाइनमा रहेका छन् ।